seheno 2017-01-04 16:43:00 Social Ny fivoriam-be rahampitso no hanapaka raha hampiakatra ny saran-dalana ho 500 ariary ihany ireo mpitatitra na tsia manoloana ny famerana ny vidin-tsolika izay navoakanny fitondram-panjakana. Raha ny tokony ho izy dia ilaina ny fampiakarana satria tsy azo ihodivirana intsony izany. Tamininy taon-dasa iny mantsy raha saika hampiakatra saran-dalana ny mpitatitra dia nosakananny fanjakana izany ary nambara fa hisy ny compensation omena azy ireo. Efa miova anefa ny taona nanao resabe taminizy ireo ny mpitondra. Etsy andaniny nilaza ny mpamily taksiborosy iray fa mitombo ny fandaniana aminizao fotoana izao. ITW : BAYAR  MPAMILY BESADY
16 (0046s 0052s talo
zan zw e 0101s 0033s las miakel
vidna gasoil 0046s )
Ny OMH no nametra ny vidin-tsolika ary izy ireo no nanolotra izany ny governemanta. Tsy nanao afatsy ny nampihatra izay vidin- tsolika izay ireo toby mpaninjara. Vidin-tolika izay efa midangana ho anireo mpitatitra. Na manambana ny hampiakatra saran-dalana aza noho izany ny mpitatitra eto an-drenivohitra dia mbola miandry fandaminana ny zotra nasionaly na dia mafy ho azy ireo aza ny fiakaranny vidin-tsolika. Ny zotra nasionaly mantsy efa nitazona ny saran-dalana hatraminny taona 2015 na dia natetika niakatra aza ny saran-dalana. Raha ny nambaranireo mpandraharaha ara-pitaterana dia miandry ny fananganana ny toby fiantsonana vaovao ho azy ireo ny zotra nasionaly vao hiroso aminny fampiharana ny saran-dalana tokana. ITW : RAKOTOMAVO PHILIPPE  ZOTRA NASIONALY
14 0028s(za wana sy ny
iwa r ts votananay 0045s 15 0004 fa an@zan...billeterie unik 0011s)
Mila mandray andraikitra ny fitondram-panjakana manoloana izao zava-msy izao. Tsy ho zakanny vahoaka mantsy raha toa ka tsy maintsy hiroso amnny fampiakarana ny saran-dalana ny mpitatitra. Actualite Articles Similaires AMBONDRONA MAHAJANGA CEPE Bruxelles: la recherche d'un consensus européen sur le commerce international Allowa VS Book